3-da Xeebood ee ugu waaweyn Jamaica | Wararka Safarka
Xeebaha iyo Dalxiisyada | | Jamaica, Xeebaha
Waxaan had iyo jeer ka hadalnaa hal xeeb gaar ahaan, si aan u falanqeyno iyada iyo hareeraheeda si qoto dheer. Laakiin runtu waxay tahay inay sidoo kale wax weyn tahay in la awoodo in laga dhigo darajo xeebeedyada ugu wanaagsan meel gaar ah sida Jamaica, oo ah gogosha reggae, taas oo maanta sidoo kale ah meel ku habboon oo lagu raaxeysto xeebteeda.
Jamaica waxaa ku yaal xeebo badan oo qurux badan, maadaama ay tahay jasiirad leh jawi aad u wanaagsan oo lagu raaxaysan karo inta badan sanadka. Laakiin waxaa jira qaar iyagu aad u taagan oo noqday kuwa ugu caansan. Haddii aad booqanaysid Jamaica fasaxaaga soo socda, kuwanu waa 3-da xeebood ee aan kugula talinayno.
2 Baay of Puerto Antonio
Xeebtani waa mid aan horay kaaga soo sheegnay horay, tan iyo Negril waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna caansan. Waa tan ugu fiican Jamaica oo dhan, waxaana loo tixgeliyaa mid ka mid ah kuwa ugu fiican adduunka, sidaas darteed waa goob inta badan leh dalxiisayaal badan. Sanadihii 60-meeyadii waxay ahayd meel hijabi u socoto, maantana waa suurtagal in lagu dhex sameeyo qaawanaan. Waxay leedahay 11 kilomitir oo geedo timireed iyo deegaan dabiici ah oo duurjoog ah. Meel u dhow waxaa ku yaal baarar, hudheelo iyo dukaamo yaryar oo maxalli ah, maadaama ay ka mid tahay kuwa ugu dalxiiska badan.
Baay of Puerto Antonio
Xeebtan waxaa lagu quudiyaa harooyinka dabiiciga ah, dhexdeeda waxaa suurtagal ah in lagu maydho biyo cad oo deggan. Tani waa meel wanaagsan oo lagu raaco kaxaynta iyo rafashada aagga Blue Lagoon. Biyaha deggan oo ay ugu wacan tahay waa meel ku habboon qoysaska.
Wabiga Dunn wuxuu kula kulmaa Kariibiyaanka xeebtan oo leh biyo nadiif ah. Socodka hoostiisa daadadka waa mid ka mid ah waxqabadyada ugu wanaagsan ee lagu qaban karo xeebtaan, marka lagu daro ka fiirsashada muuqaalka cajiibka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » safarka » Xeebaha » Xeebaha ugu sareeya 3 ee Jamaica
Xeebta Woolacombe, oo ah xeeb Boqortooyada Midowday